Casteur Manufacurer, Grate Bar, Steel Rolling, Steel Mill - Xingtejia
Izahay dia mitarika mpamatsy orinasa mpamokatra herinaratra fandoroana fako. Nahomby tamin'ny karazam-parotra 46 izahay, ary tena matotra ny fizotrany. Kalitao miorina sy vidin'ny ozinina ambany no antony tokony hisafidiananao anay.
XTJ nandritra ny 10 taona mahery dia mpamatsy entana manerantany ho an'ny OEM sy tsena fivarotana avo lenta mahatohitra hafanana ary mitafy fanoherana ny indostrian'ny Mining sy Mineral Processing.
Manome fihenam-bidy avo lenta sy avo lenta avo lenta ary fanoherana mahatohitra amin'ny milina vy maro isika, toy ny roller guide, fivorian'ny mpitari-dalana, horonan-tsolika, horonana taratra sns
Izahay no mpamatsy famolavolana taratasy. Ny fandefasana milamina sy ara-potoana dia tsy mila miahiahy momba ny fotoana fohy.
Manome rafitra fitsaboana hafanana sy tehina fototra ho an'ny mpanamboatra fitsaboana hafanana maro izahay. Mampiasa silica sol invest casting izahay, ny vokatra dia manana kalitao sy endrika fiainana tsara.
Vaovao farany momba ny Xingtejia